VMware ပေါ်မှာ Windows အတု ဖန်တီးပြီး သုံးရအောင် ~ ITmanHOME
06:35 window7, နည်းပညာ No comments
VMware ပေါ်မှာ Windows အတု ဖန်တီးပြီး သုံးရအောင်
ကျွန်တော့်ကိုမေးလ်ထဲမှာ အကိုတစ်ယောက်မေးထားတာလေးလဲရှိတာနဲ့ ကျွန်တော်လဲဒီကောင်လေးကိုအ သုံးပြုရတာကြိုက်လို့ ကျွန်တော့်လိုပဲသုံးစေချင်လို့ VMware ကို Install လုပ်နည်းလေးနဲ့အဲ့ဒီကောင်လေး မှာမိမိတို့အသုံးပြုချင်တဲ့ OS တစ်ခုကိုဘယ်လိုတင်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြပေးသွားပါမယ်..VMware ရဲ့သဘော ကတော့ Windows အတုဖန်တီးပြီး သုံးတဲ့သဘောပါပဲ..ဒါပေမယ့်တကယ့် Windows တစ်ခုကိုသုံးနေရသလိုပါ ပဲ ..မိမိတို့သုံးနေတာက Windows7ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်အခြား OS တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးသုံး ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ကလို Windows နှစ်ခုမတင်တော့ပဲ ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းလေးအတိုင်း VMware Workstation ကိုအသုံးပြုပြီးသုံးမယ်ဆိုရင် Windows နှစ်ခုတင်တာထက်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေတာတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်..ကျွန်တော်အခုတင်ပေးလိုက်တာ Lasted Version တော့မဟုတ်ပါဘူး..ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အခု သုံးနေတာဒီကောင်လေးကအဆင်ပြေသလို ပြီးတော့ Full Version လေးမို့တင်ပေးလိုက်တာပါ..ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးအတွက် Serial Key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်..ကျွန်တော် Windows7Home Basic နဲ့ စမ်းပြထားပါတယ်.. Ubuntu နဲ့ Windows XP ထဲတင်သုံးဖူးပါတယ်..အဆင်ပြေပါတယ်..အကိုပြောသလို Mac OS X Lion အတွက်တော့အဆင်ပြေမပြေတော့ကျွန်တော်လဲမပြောတက်ပါဘူး..စမ်းကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ..
VMware ကို Install လုပ်နည်းကတော့အတူတူပါပဲ OS ကိုတင်တဲ့နေရာမှာပဲ နည်းနည်းလေးကွာသွားပါလိမ့် မယ်.. ဒါပေမယ့်လည်း ပုံမှန် Windows တင်တာလောက်လဲမခက်ပါဘူး..Partation တွေကို Format ရိုက်ပေးစ ရာလဲမလိုပါဘူး.. ဒီပို့စ်လေးကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ အားလုံးကိုအချက်တစ်ချက်လေးပါမှတ်ထားပေးစေချင်ပါတယ်.. အဲ့ဒါကတော့ Software Installation လုပ်တာပါပဲ.. OS Application တော်တော်များများကိုပုံမှန်အားဖြင့် အခု ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတဲ့နည်းနဲ့ပဲ Install လုပ်တာပါ..ပုံမှန်အားဖြင့်အတူတူပါပဲ..အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ခါထဲ မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်..တစ်ချို့ က Spftware တောင်ကောင်းကောင်း Install မလုပ်တက်ကြပါဘူး..ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့လဲ အဲ့ဒီအဆင့်ထိ အသေးစိတ်လိုက်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်လဲ အဆင်မပြေလို့ပါ..ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် တို့ VMware ကိုစပြီး Install လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ..
အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ Rar File ကိုဖြေလိုက်ပါ..ပြီးရင်အထဲက vmware-workstation-full-7.1.4-385536 ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို Install လုပ်လိုက်ပါ..ဒါဆိုရင်အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာပါ လိမ့်မယ်..ပြီးရင်ဆက်လုပ်ရမယ့်အဆင့်လေးတွေကိုတော့အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်..
စပြီး Installation မလုပ်ခင်အရင်ဆုံးတစ်ခုပြင်ဆင်ထားရမှာက OS တစ်ခုကို Installation လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီOS ကိုနေရာပေးဖို့အတွက် Partation တစ်ခုထားပေးရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်..ဘာလို့လဲဆိုတော့ စတင်ခါစမှာ Disc Space ကဘာမှမရှိပေမယ့်နောက်ပိုင်းမိမိတို့ကဆော့ဝဲလ်တွေတင်မယ် ဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့Disc Space ကများလာပါလိမ့်မယ်.နောက်ပြီး OS တစ်ခုထဲမဟုတ်ဘူး နှစ်ခု သုံးခုလဲသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အ တွက် ကျွန်တော်တို့ကအခု Windows7တင်ထားတယ် နောက်ထပ် Ubuntu ထပ်တင်ချင်တယ် Windows XP ထပ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Disc Space ကများလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Partation တစ်ခုထားပြီးသုံး မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်..
( ၁၁ ) Key ထည့်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Software ကို Restart ချဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ်..Restart ချပေးလိုက်ပါ..
( ၁၂ ) Restart ပေးပြီးလို့ပြန် ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ OS ကို Installation လုပ်ဖို့စပြီးပြင်ဆင်ကြ
( ၁၃ ) သူပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဘာမှမပြောင်းတော့ပါဘူး Typical ပဲရွေးလိုက်ပါ..ပြီးရင် Next ကိုပေးလိုက်ပါ.
( ၁၄ ) ဒီအဆင့်မှာ ကျွန်တော်တို့က DVD RW Drive ကနေ Installation လုပ်မှာလား ၊ ဒါမှမဟုတ် ISO File
ကနေ Installation လုပ်မှာလားဆိုတာကိုတော့ရွေးပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်..မိမိတို့မှာ CD ခွေရှိလို့ DVD
Raw Drive ကနေ Installation လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့အရင်ဆုံး Windows ခွေကိုထည့်လိုက်ပါ.ပြီး
ရင်တော့ အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းရွေးပြီး Next ပေးလိုက်ယုံပါပဲ..
( ၁၅ )တကယ်လို့ မိမိတို့က ISO File ကနေ Installation လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့
အတိုင်းရွေးပေးပြီး Browser ကနေ ISO File လေးကိုအရင်ရွေးပေးလိုက်ပါ..ပြီးရင် Next ကိုပေးလိုက်
( ၁၇ ) ဒီအဆင့်မှာတော့ Windows Product Key နေရာမှာတကယ်လို့မိမိတို့ရဲ့ Windows ခွေမှာပါလာတယ်
တယ်ဆိုရင်ထည့်ပေးလိုက်ပါ..မပါရင်လဲမထည့်ပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..အောက်က Full name မှာတော့
ကျွန်တော်တို့ Adminstrator account လိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်.. Password ကခံချင်လဲရပါတယ် .မခံချင်
လဲဖြစ်ပါတယ်.. Password ထည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှတ်ထားပေးပါ..Installation လုပ်ပြီးလို့နောက်
ပိုင်းပြန်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် Password ထည့်ပေးမှဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
( ၁၉ ) ဒီအဆင့်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Location မှာကျွန်တော်တို့ကအခုတင်လိုက်မဲ့ OS ကိုဘယ်နေရာမှာ
နေရာပေးမှာလဲဆိုတာကို ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ Partation တစ်ခုသုံးမယ်
ဆိုရင် အောက်မှာပြထားသလိုပဲ Browse ကနေပြီးတော့ မိမိတို့သုံးမယ့် Partation ကိုရွေးပေးလိုက်
( ၂၀ ) ကျွန်တော်က သီချင်းများ ဆိုတဲ့ Partation ( E: ) ကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်..
( ၂၃ ) ဒီအဆင့်ကိုရောက်လို့ Finish ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်မှာ Windows တင်ခြင်းအပိုင်းကို
( ၂၄ ) အောက်ပုံအတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုရင် VMaware Workstation ဆိုတဲ့ Box ပေါ်မှာကလစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်
လက်ရှိ Windows တင်မဲ့အပိုင်းမှာ Keyboard တွေ Mouse တွေအလုပ်လုပ်လို့ရသွားပါပြီ..တကယ်
လို့ အပြင်ကသုံးနေတဲ့ Windows ကိုပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Keyboard က Ctrl + Alt ကိုနှိပ်
လိုက်ပါ..ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ VMware Workstation Box ပေါ်မှာ Click လိုက်လို့အ
သုံးပြုလို့ ရသွားပြီဆိုရင်တော့ Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ..
( ၂၅ ) ကျန်တဲ့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Windows တင်သလိုပါပဲ..ဘာမှလုပ်ပေးစ
( ၃၄ ) ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာပေးခဲ့တဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဝင်
( ၃၅ ) ဒါဆိုရင်တော့ Windows Installation အပိုင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ..ကျန်တဲ့ Application တင်တဲ့အပိုင်းက
( ၃၆ ) ဒါကတော့ကျွန်တော် Zawgyi-One သွင်းပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ဆိုဒ်ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ထားတာပါ..ဒီလောက်
( ၃၉ ) တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ ကသုံးနေတဲ့ Windows လေးကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Close ကိုနှိပ်ပြီး
VMware Workstation ကိုတော့ကျွန်တော် အောက်ကလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်..ဖိုင်ဆိုဒ်က 571 MB လောက်ရှိပါတယ်..ကျွန်တော်အပိုင်း ( ၅ ) ပိုင်းခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်.. အသုံးပြုချင်သူတွေ ကတော့အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့လင့် ကနေသာယူသွားလိုက်ပါ..
ဒီပို့စ်လေးကို PDF နှင့်လိုချင်ရင်အောက်မှာယူလိုက်ပါဗျာ..
VMware ပေါ်မှာ Windows တင်ပြီးရင် ဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်ရမလဲဆိုတာကို
စမ်ုးကည့်လိုက်တာ သဘောကျသွားပါတယ် Window တစ်ခုပြီး တစ်ခု စမ်းတင်ုကည့်ချင်လို့ပါခင်ဗျာ။
A:ဟုတ်ကဲ့အကို ..လွယ်ပါတယ် .. အကိုတင်ထားတဲ့ Windows ပေါ်မှာ Right Click ထောက်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Delete ပေးလိုက်ယုံပါပဲအကို ..